Nicki Minaj's mutsva mukomana anodhirowa zita rake pamutsipa wake - Macelebs
Nicki Minaj murume anokakavara mutsva anowana zita rake rakatemwa pamutsipa wake
Hapana chinoti 'ndinokuda' kunge mutsipa tat.
Pakati pekusagadzikana pamusoro pake ine nharo yakapfuura , Nicki Minaj Mukomana mutsva, Kenneth Perry, sezviri pachena akarangarira kuda kwake iye 'Mambokadzi' rapper neimwe inki nyowani.
NeChishanu, Zvita 21, Nicki akagovana vhidhiyo pa Instagram izvo zvakaratidza kuvhara kwepinki uye nhema nhema 'Onika' - zita rakapihwa Nicki - iro parizvino rinoshongedza rudyi rwese rwerudyi rwemutsipa waKenneth.
Iyo tatoo yaive yekutanga yaKenneth, sekutaura kwaNicki.
Wakarwara zaddy here? yake yekutanga tat- frontin kunge haina kuruma #Onika # HeavyOnIt #SuperSleezy ️
kristen mutariri uye dylan meyer
Chinyorwa chakagovaniswa na Barbie (@nickiminaj) pana Dec 21, 2018 pa6: 07 pm PST
'Ko tat yakakuvadza zaddy here? yake yekutanga tat-kumberi senge yaisaruma #Onika #ZvinoremaZvairi #SuperSleezy ️, '' Akanyora padivi pevhidhiyo, iyo inotanga nekamera yakamunongedzera asati atendeuka kuratidza hunyanzvi hwemuviri waKenneth.
Vaviri ava vakaita misoro masvondo mashoma apfuura apo Nicki akaita hukama hwavo Instagram zviri pamutemo. Sezvo vateveri vakakurumidza kufunga, Kenneth muteresi akanyoreswa pabonde mudunhu reNew York uye akabatwa nemhosva yekuuraya munhu muna 2002.
john cena akarambana na nikki bella
Mushure mekutaura zvisirizvo nezvezvakaitika kare zvaKenneth zvakatanga kuburitswa paNicki's Instagram feed, akayambira vashandisi, 'yeall haikwanise kumhanyisa hupenyu hwangu,' ndokuzoenderera mberi nekugovana zvakatumirwa kubva kumahombekombe egungwa pakupera kwevhiki yake yekuzvarwa yechi36.
Nicki zvakare akatevera iyo Daily Mail yekumhan'ara nezve zvakapfuura zvaKenneth, achiyambira nzvimbo iyi paTwitter kuti chokwadi chavo hachina kunaka uye aizomhan'ara mushure mekunge mutori wenhau azivisa kuti, 'aka hakasi kekutanga [Nicki] kudzivirira mutsotsi anonyoresa nezvebonde,' akabva arangarira 'akatsigira sei mukoma wake, Jelani Maraj… paakawanikwa aine mhosva yekubhinya musikana ane makore gumi nerimwe.'
Hazvina kujeka kana Nicki akaenderera nematare.
Maererano ne Isu Vhiki , Ukama hwaNicki naKenneth hwakatanga makore avo ekuyaruka muQueens. Vanonzi vakabatana zvakare pamusoro peKutenda apo Nicki naamai vake vakadzokera kunharaunda yavo yekare kunopa mahara turkeys ezororo.
Rapper uye muimbi aive zvakambobatanidzwa kuna Formula One mujaho, Lewis Hamilton.
Ciara pakurasikirwa nemwana mucheche: '48lbs kuenda!'
jessie james decker inopisa mifananidzo
shemar moore uye mapaki epaedra
kutaura kunze kwemuromo
Paul teutul mukuru mota muunganidzwa